Netizen Report: Nandràra ny “vaovao faikany” i Malezia” — i Singapaoro ve no manaraka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2018 7:50 GMT
Sary avy amin'ny Cory Doctorow. (CC BY-SA 2.0)
Noho ny fifidianana mihamanakaiky hatrany, nankatoavin'ny parlemanta Maleziana ny lalàna “iadiana amin'ny Vaovao Faikany” tamin'ny 3 aprily, na dia eo aza ny ahiahin'ny vahoaka fa hanimba ny fahalalahan'ny media izany.
Nanafoana ny parlemanta ny Praiministra Najib Razak tamin'ny 6 Aprily, tamin'ny hetsika iray hafa heverina ho tafiditra amin'ny tetikady hiantohany ny hahavoafidy azy indray.
Ahitana votoatin-dahatsoratra, sary sy media-marolafy ny lalàna, ary mamaritra ny “vaovao faikany” ho toy ny “vaovao, fampahalalana, tahiry sy tatitra izay na diso tanteraka na diso amin'ny ampahany.”
Hiharan'ny onitra hatramin'ny 500.000 ringgit (123.000 dolara amerikana) sy sazy enin-taona an-tranomaizina farafahabetsany ireo mpanitsakitsaka ny lalàna izay hita fa meloka amin'ny fizaràna votoaty tahaka izany. Mametraka adidy fanampiny momba ny sehatry ny aterineto toy ny Facebook ihany koa ny lalàna, mitaky azy ireo mba hanaisotra vaovao diso mifanaraka amin'ny baiko fanesorana votoaty, na miatrika onitra henjana. Manome antsipiriany bebe kokoa momba ny lalàna sy ny fiantraikany amin'ny fahalalahana miteny ny kisary avy amin'ny Firaisan'ny Gazety Atsimo Atsinanan'i Azia .
Mandritra izany, mandinika lalàna izay manameloka ny fielezan'ny “lainga an-tserasera natao fanahy iniana” amin'ny aterineto sy ny media sosialy ny vaomieran'ny parlemantera any Singapaoro. Nanatontosa valan-dresaka ho an'ny daholobe momba izany ny vaomiera, izay ahitana fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpampianatra ambony sy manam-pahaizana momba ny fiarovana ny aterineto avy amin'ny firenena samihafa, mpiaro ny fiarahamonim-pirenena, ary ny mpiasa ambony ao amin'ireo orinasa lehibe ao Silicon Valley.
Tamin'ny taratasy nalefa ho an'ny vaomiera, mpanao gazety mahaleotena sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices Kirsten Han nilaza hoe:
Tokony hitandrina [ny firenena] mba tsy ho maika hiady varotra ireo fitsipika lehibe ny fitsarana sy ny dingana tsy maintsy atao…. Mety hitera-doza amin'ny fanomezana fahefana be loatra ho an'ny manampahefana ireo fepetra natao tanaty hamehana, ka manimba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny adihevitra misokatra eto Singapaoro.
Nosakanana ny Facebook sy ny WhatsApp any Tchad
Tsy azo nidirana nandritra ny efatra andro ny Facebook sy ny WhatsApp tao amin'ny renivohitra Tshadiana, N’Djamena. Nitatitra ny Journal du Cameroun (Gazetin'i Kamerona) fa tsy nanome antony ofisialy nahatonga ny fanakanana ny manampahefana, saingy miahiahy ny olom-pirenena fa mety hitarika fifandonana eo amin'ny tanora ao an-tanàna manodidina izany, izay manohana ny antokon'ny fitondrana ny iray ary ny iray hafa kosa manohitra. Fotoana fohy talohan'ny fanakanana, nalefa tao amin'ny Facebook ny andian-dahatsary tezitra nikendry ny antokon'ny fitondrana.
Hanakana ny Telegram ve i Iran?
Tamin'ny resadresaka vao haingana tamin'ny onjam-peo, nilaza i Alaeddin Boroujerdi, filohan'ny Vaomieran'ny Politikan'ny Raharaha Ivelany sy ny Fiarovam-pirenena ao amin'ny parlemanta fa nanaiky ny drafitra hanakanana ny Telegram, fampiharana fandefasan-kafatra malaza amin'ny finday ny manampahefana ambony. Noforonina tao Rosia ny Telegram, saingy voasoratra anarana ankehitriny ao Etazonia sy ny Fanjakana Mitambatra, tsy manana birao na lohamilina ao Iran ny Telegram.
Nilaza i Boroujerdi fa mifototra amin'ny ahiahy momba ny fiarovam-pirenena ny fanapahan-kevitra, ary natao sy ampiroboroboina ho solon'izany ny endrika fampiharana eo an-toerana. Na izany aza, nanohitra ampahibemaso izany ny filoha Hassan Rouhani, nilaza tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Tasnim News fa “ny tanjon'ny famoronana sy fanatsarana rindrambaiko iraniana sy ny fampiasa fandefasan-kafatra dia tsy tokony ho fanakanana amin'ny fidirana [amin'ny fampiasa hafa], fa tokony ho fanafoanana ny ampihimamba.”
Amin'ireo mpiserasera 40 tapitrisa mahery— amin'ny fitambaran'ireo mpiserasera 50 tapitrisa ao Iran — ny Telegram no fampiasa fandefasan-kafatra be misera indrindra ao amin'ny firenena. Nosakanana tao Iran nandritra ny fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny andro faramparan'ny taona 2017 ka hatramin'ny tapaky ny volana Jolay 2018 ny fampiharana. Tao anatin'ny disadisa, nangataka tamin'ny fitsarana ny mpandrindra ny fifandraisandavitra ao Rosia mba hanakana ny Telegram ao Rosia, satria tsy nety nanome ny fanalahidin'ny sora-miafina ho an'ny manampahefam-panjakana ny orinasa.
Mety hiatrika fiampangana heloka bevava noho ny sarim-panoherana ny fandotoana (loto) ny gazetiboky Thailandey
Nametraka fitoriana heloka bevava tamin'ny gazetiboky amin'ny teny Anglisy Citylife Chiang Mai ny governoran'i Chiang Mai, tanàna avaratr'i Thailandy noho ny sary nalefa tao amin'ny pejy Facebook-n'ny gazetiboky. Noforonin'ny tovolahy iray eo an-toerana, mampiseho sarivongana malaza eo an-toerana misy mpanjaka Thailandey telo fahiny miaraka amin'ny saron-tava miaro amin'ny etona mipetaka eo amin'ny tarehin'izy ireo ny sary. Natao hanohana ny hetsi-panoherana “Zo Hifoka Rivotra” ao Chiang Mai izany, noho ny fiakaran'ny tahan'ny loto tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nilaza ny governora fa manitsakitsaka ny lalànan'ny heloka bevava an-tsolosaina ao Thailandy ny gazety.
Mikasa hampandoa hetra ny mpiserasera media sosialy i Oganda
Mampiroborobo drafitra mampiadihevitra hampandòa sarany isan'andro ho an'ny mpiserasera media sosialy noho ny fampiasan'izy ireo ny sehatra toy ny WhatsApp, Skype, Viber ary Twitter ny filohan'i Ogandà Yoweri Musveni. Ny drafitra hampandoa hetra dia manondro ny zava-misy fa manome “tolotra ambony” na tolo-pifandraisana OTT ahafahan'ny mpiserasera manao antso amin'ny aterineto ireo fampiharana ireo, raha tokony handoa vola ho an'ny tolotra fifandraisan-davitra eo an-toerana rehefa manao antso. Manohitra ny lalàna ireo mpikambana maro ao amin'ny parlemanta, ny orinasa tahaka ny MTN, ny orinasan'ny fifandraisan-davitra lehibe indrindra any Oganda, sy ny vondrona fiarahamonim-pirenena.
Toa miha-lehibe ny big brother (zoky be) ao Zimbaboe
Nanambara ny manampahefana ambony ao amin'ny minisiteran'ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana ao Zimbaboe fa ho apetraka ny fotodrafitrasa vaovao fanarahamaso ny fifandraisana ao amin'ny firenena izay ampitahain'izy ireo amin'ny Sampam-pitsikilovana Nasionaly (NSA) ao Etazonia. Na dia mbola tsy nampahafantarina aza ny antsipirihan'ny fomba fiasan'ny rafitra sy ny fametrahana azy, dia nanambara ny Spotlight Zimbabwe fa manampy amin'ny fampandrosoana izany ireo manampahaizana momba ny fiarovana avy amin'ny governemanta Shinoa, Rosiana ary Iraniana.
Nizara ny tahirim-pahasalamana ara-nofo avy amin'ny mpiserasera ny Grindr (saingy nampanantena fa tsy hanao izany intsony)
Nanambara ny fanadihadiana avy amin'ny vondrom-pikarohana Norveziana tsy mitady tombontsoa SINTEF fa nizara ny tahiry ara-pahasalamana saro-pady, tahaka ny sata VIH an'ny mpiserasera sy ny daty “nanaovana fitiliana farany” tamin'ireo orinasa hafa roa farafaharatsiny ny Grindr, fampiharana malaza amin'ny fitadiavam-bady LGBTQ. Apptimize sy Localytics ireo orinasa roa ireo, izay nifanaraka tamin'ny Grindr mba hanampy azy ireo hanatsara ny tolotr'izy ireo.
Nanazava ny lahatsoratra iray tao amin'ny Tumblr avy amin'i Scott Chen, Lehiben'ny Teknolojian'ny Grindr, fa “nametra ny tahiry nozaraina izay mety amin'ny tolotra omen'izy ireo sy manafin-tsoratra izany rehefa manome azy amin'ireo orinasa nifanarahana ny Grindr. Nampiasaina handinihana sy hanohanana ny fampandrosoana ny sehatra vaovao ity tahiry avy amin'ny sata VIH ity, tahaka ireo Fampahatsiahivina fitiliana VIH navoakanay vao haingana. Telo andro taorian'ny namoahana ny tatitra tamin'ny daholobe, nanaiky hanajanona ny fizarana rehetra amin'olon-kafa momba ny tahirin'ny mpiserasera mifandraika amin'ny sata-VIH amin'ny hafa ny Grindr.
Milaza ny fomba fijeriny momba ny lafiny hafa amin'ny tantaram-pahombiazan'i Mark Zuckerberg ny mpiaro ny fiarahamonim-pirenena any Myanmar
Nandritra ny resadresaka vao haingana niarahana tamin'ny Vox, nanamafy ny ezaky ny Facebook hanakana ireo fandefasan-kafatra faobe natao hitarihana herisetra eo amin'ny Bodista sy ny Miozolomana, ao anatin'ny ady ao amin'ny fanjakana Rakhine ao Myanmar tamin'ny faramparan'ny taona 2017 ny tale jeneraly mpamorona ny Facebook, Mark Zuckerberg. Ho setrin'izany, nanoratra taratasy misokatra ho an'i Zuckerberg ny vondrona fiarahamonim-pirenena sy ny vondrona mpiaro ny zo nomerika ao Myanmar, nanambara ny fijerin'izy ireo ny tantara ary nampiseho fa nitarika hadisoana – fa tsy fahombiazana – eo amin'ny rafitra Facebook ny zava-nitranga. Nanoratra izy ireo hoe:
Amin'ny toerana misy anay, mampiseho ny mifanohitra tanteraka amin'ny fahalalana onony mahomby ity tranga ity: mampiseho fiankinan-doha lehibe amin'ny hafa, ny tsy fahampian'ny rafitra mahomby amin'ny fitomboan'ny vonjy taitra, ny fisalasalana hampandray anjara ireo mpiara miombon'antoka eo an-toerana amin'ny vahaolana mahomby sy ny tsy fisian'ny mangarahara.
Mamandriha ao amin'ny Netizen Report
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Rohith Jyothish, Weiping Li, Leila Nachawati, Mong Palatino, Karolle Rabarison, Juke Carolina Rumuat ary Sarah Myers West no niara-nanoratra ity lahatsoratra ity.